मोबाइल फोनको ब्याट्रि र डाटा धेरै टिक्दैन ? ह्याक त भएन ? access_timeअसार २७, २०७८
के तपाईंको फोनको ब्याट्रि चाँडै सकिन्छ ? के तपाईंको फोनको डाटा पनि धेरै टिक्दैन ? यदि तपाईं फोनको अत्यधिक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो डाटा प्लान परिवर्तन गर्ने बेला आएको हुनसक्छ तर यदि छैन भने कुनै ह्याकरले तपाईंको फोनलाई चलाइरहेको हुनसक्छ । फोनको सुरक्ष...
ल्यापटपमा ब्याट्रीको आयु कसरी बढाउने ? कम्प्युटर इन्जिनियरको टिप्स access_timeअसार १४, २०७८
ल्यापटपको ब्याट्री ब्याकअप उक्त ब्याट्रीको लाइफसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । साधारणतया ल्यापटपको ब्याट्री तीन–चार वर्षमा फेर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, केही निश्चित तरिका अपनाउने हो भने ब्याट्रीको आयु बढाउन सकिन्छ । ब्याट्रीको आयुलाई साइकलमा नापिन्छ । साइकल भनेको...
आज वर्षको सबैभन्दा लामो दिन, सबैभन्दा छोटो रात access_timeअसार ७, २०७८
२१ जून अर्थात् आज यो वर्षको सबैभन्दा लामो दिन हो यसको अर्थ घण्टाको हिसाबले सबैभन्दा लामो घण्टाको दिन आज हुनेछ । तपाईं यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि रात सबैभन्दा छोटो हुनेछ । यसलाई अंग्रेजीमा समर सोल्स्टिस पनि भनिन्छ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यसबारे थाहा पाउन तपाईंलाई मन ल...
अब चन्द्रमामा बन्छ विशाल टेलिस्कोप access_timeबैशाख ६, २०७८
अमेरिकी स्पेश एजेन्सी नासाले चन्द्रमामा विशाल टेलिस्कोप बनाउने योजना बनाइरहेको छ । यसको नाम लुनर क्रेटर रेडियो टेलिस्कोप (LCRT) रहनेछ । यसलाइ प्योर्टो रीकोको Arecibo टेलिस्कोप जस्तै बनाइँदैछ । Arecibo टेलिस्कोप गत डिसेम्बर महिनामा ढलेको थियो । यस टेल...
वैज्ञानिकले भ्यागुतोबाट बनाए नयाँ रोबोट access_timeचैत २३, २०७७
अमेरिकी वैज्ञानिकले भ्यागुतोको कोशिकाबाट जीवित रोबोट बनाएका छन् । यो पानीमा पौडिने मात्र होइन आफ्नो कल–पुर्जा पनि बदल्न सक्छ । साथै यसको स्मरण शक्ति पनि एकदमै राम्रो छ । यो रोबोट 'Xenobots' बायोलजिकल रोबोटको 'अपडेटेड भर्सन' पनि...
युरेनियम के हो ? कहाँ–कहाँ हुन्छ यसको प्रयोग access_timeफागुन २८, २०७७
नेपालमा पहिलोपटक युरेनियम बरामद गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धबाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयको टोलीले बिहीबार साढे २ किलो युरेनियम बरामद गरेको हो । आखिर के हो त युरेनियम ? धर्तीभित्र एउटा यस्तो चीज पाइन्छ, जो देख्नमा अत्यन्त सुन्दर, सफा र...
आधा पोथी, आधा भाले भएको दुर्लभ चरा भेटियो access_timeफागुन १६, २०७७
हिन्दूहरूको एउटा पौराणिक शास्त्रीय मान्यता छ -अर्धनारीश्वर, अर्थात एउटै देहमा नर र स्त्री दुबै शरीरको उपस्थिति। भगवान् शिवको एउटा रूप अर्धनारीश्वरका मन्दिर र प्रायः जसो अन्य शिव अथवा देवीका शक्तिपीठहरुमा अर्ध नारीश्वरका विग्रह रहेको पाइन्छ। यस्ता विग्रहम...
न्यूयोर्क सहरभन्दा ठूलो आइसबर्ग टुक्रियो access_timeफागुन १६, २०७७
अन्टार्कटिकामा ब्रन्ट आइस सेल्फबाट बरफको ठूलो हिस्सा शुक्रबार टुक्रिएर अलग भएको छ । यो स्थान बेलायतको साइन्टिफिक आउटपोष्ट नजिकै रहेको छ । ब्रिटिश अन्टार्टिक सर्भे (बीएएस) का अनुसार बरफको टुक्रिएको हिस्सा १२७० वर्ग किलोमिटर ठूलो रहेको छ । यसको आकार न्यूयोर्क श...
मंगलमा सफल ल्यान्डिङको खुशीमा भर्चुअल आतिशबाजी access_timeफागुन ८, २०७७
नासाको महत्वाकांक्षी मंगल अभियानको रोभर ‘पर्सिवरेन्स मार्स रोवर’ले मंगल ग्रहको जेजेरो क्रेटरमा गरेको सफल 'ल्यान्डिङ' पछि अमेरिकामा मात्रै होइन संसारभरी नै खुशियाली मनाइएको छ। नासाको यो मिसन यस कुराले गर्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यस अभियानको ...
मंगल ग्रह अभियानमा धक्का, अर्बपति एलन मस्कको सपना अझै लम्बिने access_timeमाघ २३, २०७७
मंगल अभियानका लागि द्रुत गतिले काम गरिरहेका विश्वकै शीर्ष धनाढ्य एलन मस्कको कम्पनी 'स्पेस एक्स'लाई असफलता ब्यहोर्नु परेको छ। कम्पनीले यस प्रयोजनका लागि बनाएको रकेट परीक्षणका क्रममा धराशायी भएको छ। 'स्पेस एक्स' कम्पनी निकट भविष्यमै ...
तपाईंको फेसबुक अरुले चलाएको कसरी थाहा पाउने ? access_timeमाघ २३, २०७७
यस्तो ठाउँ जहाँ इलेक्ट्रानिक उपकरणले काम गर्दैनन् access_timeमाघ २०, २०७७
घुम्ने, नयाँ नयाँ ठाउँ पुग्ने रहर कसलाई हुन्न र ? संसारभरका अनेको ठाउँ आ-आफ्नो विशेषताका लागि प्रख्यात छन्। हाम्रै नेपालमा यस्ता अनेकौं ठाउँ छन्, जसलाई हेर्न विश्वभरिबाट लाखौं पर्यटक आउने गर्छन्। संसारभरि नै पर्यटकलाई लोभ्याउने हजारौं...
अन्तरिक्षमा बिजुली ! access_timeमाघ १५, २०७७
पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा चम्केको बिजुलीका दृश्य, हेर्नमा जति रोमाञ्चक हुन्छन् त्यति नै खतरनाक पनि। तर के तपाईंलाई थाहा छ अन्तरिक्षमा रहेर अन्तरिक्षमा उत्पन्न भएको बिजलीको दृश्यावली हेर्नुको अनुभव सर्वथा पृथक हुन्छ। पृथ्वीको प्रतिनिधित्व गर्दै केही मानिस सधै अन्...